Cellulose Fibre Factory - China Cellulose Fibre Abakhiqizi, abahlinzeki
Ukufafaza i-Cellulose Fibre Yokuvimbela Nokunciphisa Umsindo
Ngokufakwa kwayo okukhulu okushisayo, ukusebenza kwe-acoustic kanye nesici esihle kakhulu sokuvikelwa kwemvelo, i-Ecocell® fafaza i-cellulose fiber shayela ukwakhiwa komkhakha we-fiber fiber. Lo mkhiqizo wenziwe ngokhuni lwemvelo olungaphinde lusetshenziswe kabusha ngokucubungula okukhethekile ukwakha ukuvikelwa kwemvelo okuluhlazaizinto zokwakha futhi ayinayo i-asbestos, ingilazi yefayibha nezinye izinto zokwenziwa kwamaminerali. Inempahla yokuvikela umlilo, ubufakazi besikhunta nokumelana nezinambuzane ngemuva kokwelashwa okukhethekile.
Ecocell® fafaza i-cellulose fiber kwenziwa ngabasebenzi bezokwakha bezobuchwepheshe abanezinto ezikhethekile zokufafaza zokwakha, ayikwazi ukuhlangana kuphela nezinamathiselo ezikhethekile, fafaza kunoma yisiphi isakhiwo esisezimpandeni zotshani, ngomthelela wokufaka umsindo othinta umsindo, kepha futhi kungaba ngokwahlukeneyo ithululelwe embotsheni yodonga, yakha i-tight ukwahlukanisa uhlelo soundproof.
I-Ecocell® GSMA i-cellulose fiber ingenye yezinto ezibalulekile ze asphalt itshe mastic. I-asphalt pavement (Umgwaqo weSMA) ne-Ecocell® I-GSMA inokusebenza okuhle kokumelana ne-skid, ukunciphisa amanzi angaphezulu komgwaqo, ukwenza ngcono ukuphepha kokushayela kwezimoto nokunciphisa umsindo. Ukungeza i-GSMA cellulose fiber kumixube ye-SMA, i-cellulose fiber ingaba yinhlanganisela enezinhlangothi ezintathu, njengokhonkolo wensimbi oqinisiwe, i-geogrid ne-geotextiles into eqinisiwe, ingadlalaukuqinisa ukusebenza ekwakhiweni komgwaqo, engenza umkhiqizo uqine ngokwengeziwe.
Ngokwesicelo somgwaqo weSMA, sinezinhlobo ezimbili i-cellulose fiber: I-fiber ye-GSMA Cellulose ene-10% ye-bitumen ne-GSMA-1 Cellulose fiber ngaphandle kwebitume.
1.I-cellulose fiber, ubizwa nangokuthi i-lignin fiber noma izinkuni fibre, luhlobo lwe-organic fiber material eyenziwe yi- yemvelo izinkuni zilashwa ngamakhemikhali. Ngenxa yempahla emunca amanzi imicu, ingadlala indimaukugcina amanzi ngesikhathi sokumiswa noma sokuphulukiswa kwento yomzali futhi ngaleyo ndlela kuthuthukiswe imvelo yokugcinwa kwempahla yomzali nokwenza ngcono izinkomba zomzimba zento yomzali.
2. Ngenxa yento eyenziwe ngosilika kanye nokuqina kwempahla, ingadlala indima yokuxhumanisa ku-masterbatch ukuze ikhulise ukuguquguquka kwe-masterbatch, ukuqina, anti-ufa, nokusebenza okunciphayo okuphansi kufayela le- udaka oluxubekile olomile.